Hosea 10 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Israel yɛ bobe a ɛresɛe; wɔbɛsɛe no (1-15)
Woduae na wotwae (12, 13)
10 “Israel yɛ bobe a ɛresɛe;* ɔsow n’aba.+ N’aba redɔɔso no, na n’afɔremuka nso redɔɔso;+Bere a n’asaase so nnɔbae redɔɔso no, na n’abosom adum reyɛ fɛ kɛse.+ 2 Wɔn koma yɛ nyaatwom;*Enti wobebu wɔn fɔ. Obi bɛba abebubu wɔn afɔremuka, na wasɛe wɔn abosom adum. 3 Afei wɔbɛka sɛ, ‘Yenni hene,+ efisɛ yensuro Yehowa. Na dɛn na ɔhene betumi ayɛ ama yɛn?’ 4 Wɔkeka nsɛnhunu ne ntam hunu,+ na wɔyeyɛ apam;Enti atɛn a wobu no te sɛ nwura bɔne* a atrɛw wɔ afuw mu nkofi so.+ 5 Bet-Awen nantwi ba honi no nti, Samariafo bɛbɔ hu.+ Kurom hɔfo bedi ho awerɛhow,Na ananafo anyame akɔmfo a na wodi ohoni no ne n’anuonyam ho ahurusi no, wɔn nso bedi awerɛhow,Efisɛ wobetu n’ase afi wɔn mu akɔ obi man so. 6 Wɔde bɛkɔ Asiria akɔkyɛ ɔhenkɛse no.+ Efraim ani bewu,Na afotu a Israel tiei nti, n’anim begu ase.+ 7 Nea ɛte biara, wobetwa Samaria ne ne hene afi hɔ*+Te sɛ abaa sin bi a ɛda nsu ani. 8 Bet-Awen sorɔnsorɔmmea*+ a ɛde Israel bɔne bae no,+ wɔbɛsɛe no.+ Nsɔe ne nwura* befifi wɔ wɔn afɔremuka so.+ Nnipa bɛka akyerɛ mmepɔw sɛ, ‘Monkata yɛn so!’ Na wɔbɛka akyerɛ nkoko sɛ, ‘Mummegu yɛn so!’+ 9 O Israel, woayɛ bɔne fi Gibea bere so.+ Wɔansakra.* Ɔko a wɔde baa asoɔden mma so wɔ Gibea no ansɛe wɔn koraa. 10 Bere a mepɛ na mɛtwe wɔn aso. Na sɛ mede wɔn bɔne abien no sɛn wɔn kɔn mu* a,Aman bɛboaboa wɔn ano aba wɔn so. 11 Ná Efraim yɛ nantwi a wɔatete no ama n’ani agye ho sɛ ɔbɛporow hwiit,Enti mamma wamfa ne kɔn fɛfɛɛfɛ no anyɛ adwumaden. Nanso afei mɛma obi atena Efraim so.*+ Yuda bɛfɛntɛm, na Yakob afuntum ama no. 12 Mungu aba wɔ trenee mu, na muntwa ɔdɔ a enni huammɔ. Monnɔw afusaase mfa,+Ɛnnɛ a bere wɔ hɔ a mobɛhwehwɛ Yehowa yi.+Monhwehwɛ no nkosi sɛ ɔbɛba abɛkyerɛkyerɛ mo wɔ trenee mu.+ 13 Nanso moafɛntɛm amumɔyɛ,Moatwa bɔne,+Na moadi nnaadaa aba.Efisɛ mode mo ho too mo ankasa kwan so,Na mode mo ho too mo mmarima bebrebe a wonim ko no so. 14 Ɔko ho dede bɛba wo nkurɔfo so,Na wɔbɛsɛe wo nkurow a wɔabɔ ho ban no nyinaa,+Sɛnea Salman sɛee Arbel fiWɔ ɔko bere mu, bere a wɔtetew ɔbaatan mu kaa ne mma ho no. 15 Saa ara na wɔbɛyɛ mo, O Betelfo,+ efisɛ mo bɔne dɔɔso dodo. Sɛnea ɛte biara, wobetwa Israel hene afi hɔ* ahemanakye.”+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɛretrɛtrɛw.”
^ Anaa “toro; toromtorom.”
^ Anaa “nwura a awuduru wom.”
^ Nt., “wɔbɛma wɔaka wɔn ano atom.”
^ Anaa “nkyɛkyerɛ.”
^ Anaa “Ɛhɔ na wɔtoaa so.”
^ Kyerɛ sɛ, mema wɔsoa wɔn asotwe te sɛ kɔndua.
^ Anaa “obi de hama aso ne kɔn ama ɔde atwe ade.”
^ Nt., “wɔbɛma waka n’ano atom.”